The Ab Presents Nepal » नेपाल भारत सीमामा तरकारी तथा फलफुल जाँच नगर्नु भन्ने भारतलाई नेपालले उल्टै फर्कायो यस्तो जवाफ!सरकारको कदम ठिक कि बेठीक कमेन्ट गर्नु होला !
नेपाल भारत सीमामा तरकारी तथा फलफुल जाँच नगर्नु भन्ने भारतलाई नेपालले उल्टै फर्कायो यस्तो जवाफ!सरकारको कदम ठिक कि बेठीक कमेन्ट गर्नु होला !
काठमाडौं -: नेपाल सरकारले भारतीय फलफुल र तरकारी सीमामा रोकेपछि चौतर्फि तारिफ भइरहेको छ । सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै भारतबाट आयात भइरहेको विषादीयुक्त तरकारीमा रोक लगाइएको जानकारी दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफ्नो देशका उत्पादित तरकारी रोकिएको सम्बन्धमा भारतले देखाएको असन्तुष्टिबारे यस्तो जवाफ फर्काउनु भएको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।’
आफ्नो देशमा उत्पदित तरकारी नेपालमा छिर्न नदिएको भन्दै भारतीय दूतावासले केही दिन अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । दूतावासले लेखेको पत्रमा नकारी आयात प्रक्रिया निर्वाध सुचारु गराउन आग्रह गरिएको थियो । यही सन्दर्भमा मन्त्री बास्कोटाले सरकारको धारणा ल्याउनु भएको हो ‘।
बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘तरकारी तथा फलफूल चेकजाँच नियमित प्रक्रिया हो । यसमा अरु कुनै कारण छैनु नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा भएकाले चेकजाँच हुनु राम्रो हो। प्राविधिक समस्या परेको भए हल गर्छौं ।’मन्त्री बास्कोटाले नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने सबै कुरा विषादीरहित हुनुपर्ने अडान राख्नु भएको छ’ ।
चीन र भारत जहाँबाट आए पनि विषादीरहित तरकारी आउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकको स्वास्थ्यका लागि यो चेकजाँच गर्नु कुरा राम्रो कुरा भएकाले सबैले गर्दा राम्रो हुने उहाँको बुझाई छ । उहाँले चेकजाँज गर्दा केही प्राविधिक सामाग्रीको कारणले झन्झटिलो भएको भए सहज बनाउन सरकार तयार भएको बताउनुभयो ‘।
मन्त्री बास्कोटाले कुनै पनि देशले कसैको पनि स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो उत्पादनले भारतीयको स्वास्थ्यको खेलबाट गर्न मिल्छ न भारतीय उत्पादले नेपालका नागरिको स्वास्थयमा खेलबाड गर्न मिल्छु ।’ यसबारेमा दुवै सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ‘।